Uhlaziyo lwe-marshmallow lwe-Android 6.0 lwe-lg v10 eyahlukileyo yamazwe aphesheya iya bukhoma
Eyona Iindaba Kunye Nohlolo Uhlaziyo lwe-Android 6.0 Marshmallow lweLG V10 eyahlukileyo yamazwe aphesheya iya bukhoma
Abanini be-LG kunye ne-apos; ezimbini-zokudubula ngaphambili kwefowuni yeqhawe, i-V10, enegama lokulinda ukulindela ukwenza uhlaziyo lwe-Android Marshmallow. Kodwa kungekudala, i-LG izise kwizithembiso zayo kwaye yaqala ukuhlwayela uhlaziyo lwe-Android 6.0 kwisixhobo kunye neapos zamazwe aphesheya eMzantsi Korea, eTurkey, nakwamanye amazwe kwihlabathi liphela. Kubonakala ngathi abasebenzisi abaphumelelanga ukufumana ii-emojis ezintsha zongezwa kuhlobo lwe-6.0.1, kodwa emva koko, i-LG inezichazi eziyilelwe ngokwazo kwisoftware yayo.
Ukulinganisa malunga ne-850MB, uhlaziyo lutshintsha uhlobo lwe-phablet & apos; kwiV20b ngenombolo yokwakha ye-MRA58K. I-LG izise uninzi lwesitokhwe se-Android Marshmallow ukusebenza kwi-phablet, enje ngeNdlela yokonga amandla, iSabelo esithe ngqo, useto lweapps ezintsha kunye neemvume, imo yokuphinda isebenze, kunye nokulungelelanisa ukukhanya okuzenzekelayo, phakathi kwezinye izinto. Kwakhona, i-QMemo + ibizwa igama kwakhona kwi-Capture +, kwaye i-LG Bridge ngoku yaziwa ngokuba yi-LG AirDrive. Ubungendawo!
Ukuvuselelwa kweposi, iKhowudi yokuNkqonkqoza ngoku ifuna iimpompo ezi-6 ubuncinci kwiikona ezi-3 ezahlukeneyo zesikrini ukuze zisebenze. Abanye benu banokufunda ipateni entsha, enzima ngakumbi ethatha ixesha elininzi kwaye ivule indawo engaphezulu yempazamo kunye neempazamo.
I-LG V10 yeyona LG yakutsha nje yokufumana uhlaziyo lweMarshmallow. Ngaphambi kwayo, i-LG ihlaziye i-G4, G3, kunye ne-G Stylo handsets. Asinalo ulwazi malunga nokuba kuya kuthatha ixesha elingakanani ngaphambi kokuba i-firmware entsha ifikelele ngaphaya kweKorea neTurkey, ke okwangoku, gcina iso ujonge isaziso esikukhuthaza ukuba uhlaziye i-OTA.
nge Igunya le-Android
Ukuthintela i-app kuhlaziyo
s10 isikhuseli sangaphambili esifakiweyo
Isamsung kunye neapos ye-Galaxy Tab A 10.1 (2019) iyathengiswa ngesaphulelo esikhulu kunye newaranti yonyaka omnye
Ukude, qala, uvule okanye ulandelele imoto yakho? Kukho iiapps zento (iFord vs Honda vs Chevrolet)
I-Instagram inokukuvumela ukuba ufihle amabali athile kubantu abathile
USony ubhengeze amaxabiso ase-US kunye nemihla yokukhutshwa kweXperia XZ yePrimiyamu, iTouch, kunye neXA1 Ultra
I-iPhones ezi-Purple zilungiselelwe uku-oda kwangaphambili namhlanje!